Ofi soro baa fam besoo me mu;
ɔtwee me fii nsu a mu dɔ mu.
Ogyee me fii me tamfo hoɔdenfo nsam,
wɔn a wɔn ani sa me, na wɔn ho yɛ den dodo ma me no.
Wɔbaa me so wɔ mʼamanehunu da mu,
nanso Awurade maa me so,
wode me baa baabi a hɔ trɛw;
ogyee me, efisɛ nʼani sɔɔ me.
Awurade ne me adi no sɛnea me trenee te;
wahwɛ me nsa a ho tew so atua me ka.